Axmaaro Ku Dibad Baxaysa Dowladda Itoobiya | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Axmaaro Ku Dibad Baxaysa Dowladda Itoobiya
Tobanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay maagalada Gondor ee dalka jaarka nala ah ee Itoobiya maanta. Dadka isugu soo baxay dibad baxaa ayaa la sheegay inay ka cadheysan yihiin qaabka shaqo ee dawlada Itoobiya guud ahaan iyo weliba inay deegaan ay leeyihiin qowmiyada Amxaaro hoos geysay maamulka Tigray.
Dadkaa mudaaharaadka ka qeyb galaya ayaa ka dalbanaya dawlada dalkaa ee uu hoggaamiyo xisbiga EPRDF inay ka laabato go’aankaa ay dhulal aan islahayn isku maamul kaga dhigtay.
EPRDF ayaa waxaa u badan qowmiyada Tigre. Sidoo kale xisbigaa oo markii hore jabhad ahaa ayaa sanadkii 1991 ka tuuray xukunka Madaxweynihii dalkaa Mingistu Xayle Maryam oo dabadeed asagu u cararay dalka Zimbabwe.
Haatan oo mudaaharaadku weli socdo ayaa dawlada dalkaasi sheegeysaa in in ka badan 10 qof ay ku dhinteen rabshado dhex maray dibad baxeyaasha iyo ciidamada booliska.
Muranka dhulkaa la hoosgeeyay ismaamulka Tigray balse qowmiyada Amxaaro sheeganayso ayaa taagnaa dhowrkii asbuuc ee tagay.
Magaalada Gondor ayaa dhacda waqooyiga Itoobiya.
Muran dhulka kusaabsan ayaa sidoo kale horraantii sanadkaan ka dhex dhacay dawlada Itoobiya iyo qawmiyada Oromada kadib markii dawladu ku soo ballaarisay ama kusoo fidisay caasimada Addis gobolka Oromiya qawmiyadaana ay arinkaa diiday kana dhiidhiday.